စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-04 > စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး
ယေရှုခေတ်တွင်ဂျူးများနှင့်ရှမာရိလူမျိုးများအကြားအဓိကအငြင်းပွားမှုမှာဘုရားသခင်အားကိုးကွယ်သင့်သောနေရာဖြစ်သည်။ ရှမာရိလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်၌မပါ ၀ င်တော့သဖြင့် Garizim တောင်သည်ယေရုရှလင်မြို့မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အားဝတ်ပြုရန်နေရာမှန်ဟုရှုမြင်ကြသည်။ ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်နေစဉ်တွင်ရှမာရိလူမျိုးအချို့သည်သူတို့၏ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဂျူးများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပြီးဇေရုဗဗေလသည်သူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ရှမာရိလူမျိုးများသည်ပါးရှားဘုရင်အားမကျေမနပ်ဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအလုပ် (Esra [နေရာ] ၄) ကိုရပ်နားခဲ့သည်။ ဂျူးများကဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သောအခါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှမာရိသည်ဂျူးများအားစစ်ရေးအရအရေးယူရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရှမာရိလူမျိုးတို့သည်ဘီစီ ၁၂၈ တွင်ဂျူးများတည်ဆောက်ခဲ့သော Gerizim တောင်ပေါ်တွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘုရားကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ Chr ။ ဖျက်ဆီးခံရသည်။ မင်းရဲ့ဘာသာနှစ်ခုရဲ့အခြေခံကမောရှေပညတ်ဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကခါးသီးတဲ့ရန်သူတွေပါ။
ဂျူးအများစုသည် ရှမာရိမြို့ကို ရှောင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယေရှုသည် တပည့်တော်များနှင့်အတူ ဤပြည်သို့ ကြွသွားခဲ့သည်။ မော​ပန်း​နေ​တဲ့​အတွက် ရှု​ခါ​မြို့​နား​က ရေ​တွင်း​မှာ ထိုင်​ပြီး စား​သောက်​ဖို့ တပည့်​တွေကို မြို့​ထဲ လွှတ်​လိုက်​တယ်။ (ယော. 4,3-၈)။ ရှမာရိမြို့မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရောက်လာပြီး ယေရှုသည် သူမအား မိန့်တော်မူ၏။ သူသည် ရှမာရိအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် သူ၏တပည့်များနှင့် စကားပြောနေခြင်းကြောင့် အံ့သြသွားသည် (း၉ နှင့် ၂၇)။ သခင်ယေရှုသည် ရေငတ်သော်လည်း ရေခပ်ရန် သူနှင့်ဘာမျှမရှိပေ။ ရှမာရိအမျိုးသမီး၏ရေပုံးမှ ဂျူးတစ်ဦးသည် အမှန်တကယ်သောက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးကို ထိမိခဲ့သည်။ ဂျူးအများစုသည် ထိုအိုးကို ၎င်းတို့၏ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ မစင်ကြယ်ဟု ယူဆကြသည်။ “ယေရှုက၊ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ဆုကျေးဇူးကို သိတယ်ဆိုရင် သောက်စရာ တစ်ခုခုပေးပါဦးလို့ တောင်းရင် အသက်ရှင်ရေကို ပေးလိမ့်မယ်” (ယောဟန်၊ 4,10).
ယေရှုသည် စကားလုံးများဖြင့် ပြဇာတ်တစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သက်ရှိရေဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် အများအားဖြင့် ရွေ့လျား၊စီးဆင်းနေသောရေကို ဆိုလိုသည်။ Sychar မှာ တစ်ခုတည်းသောရေက ရေတွင်းဖြစ်ပြီး အနီးနားမှာ လည်ပတ်ရေမရှိဘူးဆိုတာကို အမျိုးသမီးက ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူဘာပြောနေတာလဲ ယေရှုကိုမေးတယ်။ “ယေရှုကလည်း၊ ဤရေကိုသောက်သောသူသည် တဖန်ရေငတ်လိမ့်မည်။ ငါပေးသောရေကို သောက်သောသူမူကား၊ အစဉ်အမြဲ ရေငတ်ခြင်းသို့မရောက်၊ ငါပေးသောရေသည် ထိုသူ၌ ထာဝရအသက်သို့ စီးဝင်သောရေရင်းမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။” (ယောဟန်၊ 4,13-14) ။
ထိုမိန်းမသည်ယုံကြည်ခြင်းရန်သူထံမှဝိညာဉ်ရေးရာအမှန်တရားကိုလက်ခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ သူမဂျူးရေကိုသောက်မလား။ သူသည်ထိုကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်ဖြင့်ရေငတ်။ ဘယ်တော့မျှရေငတ်။ ဘယ်တော့မျှအလုပ်ကြိုးစားရမည်မဟုတ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့သည်။ သူပြောသောအမှန်တရားကိုသူနားမလည်သောကြောင့်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးများ၏အဓိကပြproblemနာကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ သူမကသူမရဲ့ခင်ပွန်းကိုခေါ်ပြီးသူနဲ့အတူပြန်လာဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ သူ၌သူ၌ခင်ပွန်းမရှိကြောင်းသူသိပြီးဖြစ်သော်လည်းသူသည်သူ၏ဝိညာဉ်ရေးအခွင့်အာဏာ၏လက္ခဏာတစ်ခုအနေဖြင့်သူ့ကိုမေးခဲ့သည်။
ယေရှုသည် ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကို သိရှိပြီးနောက် ရှမာရိအမျိုးသမီးသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရန် မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှမာရိလူများနှင့် ဂျူးလူမျိုးတို့အကြား အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော အငြင်းပွားမှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ “ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများသည် ဤတောင်ပေါ်တွင် ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ ယေရုရှလင်မြို့သည် ကိုးကွယ်ရာအရပ်ဖြစ်သည်” (ယောဟန်၊ 4,20).
“ယေရှုက၊ အချင်းမိန်းမ၊ ငါ့ကိုယုံလော့၊ သင်သည် ဤတောင်ပေါ်၌ဖြစ်စေ၊ ယေရုရှလင်မြို့၌ပင် ခမည်းတော်အား မကိုးကွယ်ရမည့်အချိန် ရောက်လာလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကို ကိုးကွယ်သည်ကို သင်သည် မသိ။ ငါတို့ကိုးကွယ်သောအရာကို ငါတို့သိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကယ်တင်ခြင်းသည် ယုဒလူတို့ထံမှလာ၏။ ယခုမူကား၊ စစ်မှန်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများသည် ခမည်းတော်ကို စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည် ထိုသို့သော ဝတ်ပြုသူများကိုလည်း အလိုရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏၊၊ ကိုယ်တော်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည် စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် သစ္စာအားဖြင့် ကိုးကွယ်ရမည်” (ယော 4,21-24) ။
ယေရှုသည် အကြောင်းအရာကို ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခဲ့သလား။ မဟုတ်ဘူး၊ သေချာပေါက်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းက ကျွန်ုပ်တို့အား ထပ်လောင်းညွှန်ပြသည်– “သင်တို့အား ငါပြောသောစကားများသည် ဝိညာဉ်နှင့်အသက်ဖြစ်၏” (ယောဟန်၊ 6,6၃)။ “ငါသည် လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက်ဖြစ်၏” (ယော၊ ၁4,6) ယေရှုသည် ဤထူးဆန်းသော ရှမာရိအမျိုးသမီးအား ကြီးစွာသောဝိညာဉ်ရေးအမှန်တရားကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော်ထိုအမျိုးသမီးသည်ဘာကိုတွေးရမည်ကိုသေချာမသိဘဲ“ ခရစ်တော်ဟုခေါ်ဝေါ်သောမေရှိယကြွလာသည်ကိုငါသိသည်။ သူလာတဲ့အခါသူကငါတို့အားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ ယေရှုကသူမအား“ ငါကမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူပဲ” (း ၂၅-၂၆) ။
သူ၏မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသမှုမှာ“ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်” (မေရှိယ) ဖြစ်သည် - အလွန်ထူးခြားသည်။ သခင်ယေရှုသည်ကောင်းမွန်စွာခံစားနေကြောင်းသိသာထင်ရှား။ သူမပြောသောစကားသည်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ထိုအကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးသည်သူမ၏ရေအိုးကိုထားခဲ့ပြီးယေရှုအကြောင်းလူတိုင်းအားပြောပြရန်မြို့ထဲသို့သွားခဲ့သည်။ သူမသည်လူများအား၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်ယုံကြည်ခဲ့ပြီးလူအများစုကယုံကြည်လာကြသည်။ “ ဒါပေမယ့်ဒီမြို့ကရှမာရိလူအတော်များများကသက်သေခံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့စကားကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်၊ သူလုပ်ခဲ့တာအားလုံးကိုငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ရှမာရိလူတို့သည်အထံတော်သို့လာသောအခါ၊ သူတို့နှင့်အတူနေစေခြင်းငှါတောင်းကြ၏။ ထိုအရပ်၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏။ များစွာသောသူတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကို ထောက်၍ ယုံကြည်ကြ၏။ ” (း ၃၉-၄၁)
ဘုရားသခင်သည်နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ပြုရေးသည်ယေရှုနှင့်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရအသက်အတွက်လိုအပ်သောသက်ရှိရေအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့လိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နဲ့ငါတို့ရဲ့ရေငတ်မှုကိုပြေလည်အောင်လုပ်ဖို့ငါတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ဥပမာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ၊ မျက်စိကန်းသူ၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ဟု ၀ န်ခံရမည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝမှု၊
သင်လိုအပ်သောအရာများအတွက်ယေရှုကိုမျှော်ကိုးသည့်အခါသင်သည် ၀ ိညာဉ်နှင့်အမှန်တရားဖြင့်ဆုတောင်းနေသည်။ ဘုရားသခင်အားစစ်မှန်သောဆည်းကပ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်အပြင်ပန်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြင့်မဖော်ပြပါ။ သို့သော်ယေရှုခရစ်အပေါ်ထားရှိသောသင်၏သဘောထားနှင့်ယေရှု၏စကားကိုကြားနာခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တော်မှတစ်ဆင့်သင်၏ ၀ ိညာဉ်ဖခင်ထံရောက်ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။